K9 मास्क® कुकुर एयर फिल्टर N95 - धुवाँ, धुलो, रातो टाइड, खरानी, ​​टियर ग्यास - गुड एयर टोली द्वारा K9 मास्क®
वायु गुणस्तर संकटमा
कुकुर एयर फिल्टर मास्क
गुलाबी काले लाल सुन्तला
तपाईंको कुकुरको लागि वाइल्ड फायर धुवाँको समस्या समाधान गर्दै
जंगली आगोको धुवाँ कुकुरहरूको स्वास्थ्यको लागि गम्भीर चिन्ताको विषय हो। K9 Mask® को सुरक्षा गर्ने सरल र प्रभावकारी तरिका हो जंगलको आगोको धुवाँबाट कुकुर.
वाइल्ड फायर धुवाँ मा
वाइल्ड फायर धुवाँ तपाईंको कुकुरको फोक्सो र मुटुको स्वास्थ्यको लागि सबैभन्दा हानिकारक खतराहरू मध्ये एक हो।
धुवाँको लागि K9 मास्क®
तपाईको कुकुरको स्वास्थ्य लाई जोगाउँदै
खराब हावा गुणस्तरले तपाइँको कुकुरको लागि स्वास्थ्य समस्याहरू सिर्जना गर्न सक्छ। हाम्रो लक्ष्य तपाईलाई नवीनताको साथ सशक्त बनाउनु हो एयर फिल्टर समाधान एक संकट मा आफ्नो पाल्तु जनावर को रक्षा गर्न।
K9 पुलिस कुकुरहरूलाई ओभरडोजबाट जोगाउँदै
K9 मास्क® एयर फिल्टर
रिपोर्टहरू K9 सेवाको बढ्दै छन्
कुकुरहरूले पुलिस अधिकारीहरूलाई ड्रग छापामा मद्दत गर्दै फेन्टानिल ओपियोइड ओभरडोजको लक्षणहरू देखाउँदै।
N95 K9 मास्क® चरम
उत्तम बिक्रि हुने K9 मास्क®
कुकुरलाई विषाक्त हावाको गुणस्तरबाट जोगाउन सबैभन्दा राम्रो बिक्री हुने K9 मास्क®।
कुकुरको लागि वायु गुणस्तर समस्याहरू
तपाईंको स्थानमा घरपालुवा जनावरहरूलाई वायु प्रदूषणको खतराहरू के हुन्? के तपाइँको कुकुर यी समस्याहरु बाट पीडित छ?
आफ्नो पाल्तु जनावर को स्वास्थ्य को रक्षा
हाम्रो अभिनव कुकुर एयर फिल्टर मास्क जंगली आगोको धुवाँ, खरानी, ​​धुलो, रसायन, एलर्जी, मोल्ड, परागकण, आँसु ग्यास, धुवाँ, ओजोन र ब्याक्टेरियाबाट जोगाउँछ। K9 मास्क® कुकुरहरूको लागि एयर फिल्टर तपाइँको पाल्तु जनावर को स्वास्थ्य को लागी एक समाधान हो।
हामी यस्तो क्षेत्रमा बस्छौं जहाँ हामीलाई आगोबाट दुई पटक बाहिर निकालिएको छ। हामी हाम्रा कुकुरहरू यति धेरै धुवाँ र खरानीको साथ बाहिर भएकोमा धेरै चिन्तित छौं। हामीलाई चाहिएको मात्र हो।
सान्ता रोजा, CA
K9 मास्क राम्रोसँग बनेको छ र प्रयोग गर्न सजिलो छ। मलाई विशेष गरी मनपर्छ कि मास्क फिल्टर इन्सर्टहरूको साथ पुन: प्रयोगयोग्य छ। डबल पट्टा फिट सुनिश्चित गर्न एक राम्रो सुविधा हो।
भिक्टोरिया बीसी, क्यानडा
साँच्चै उत्कृष्ट K9 मास्क! मेरो कुकुरको मास्क भर्खरै आयो र म यसमा कत्ति खुसी छु भनेर टिप्पणी गर्न चाहन्छु।
राम्ररी बनेको। मलाई तपाईंको कुकुरलाई मास्क लगाउने बानी बसाल्ने भिडियो पनि मन पर्यो।
यो धेरै सहज छ, हल्का तौल छ, र लगाउन र उतार्न सजिलो छ।
स्थानीय रूपमा संयुक्त राज्य अमेरिका मा निर्मित
K9 मास्क गुड एयर टीम द्वारा अस्टिन, टेक्सास मा डिजाइन गरिएको छ र संयुक्त राज्य अमेरिका मा बनेको छ। अमेरिकी उत्पादनलाई समर्थन गर्नुभएकोमा धन्यवाद।
हामी हाम्रो K9 मास्क® समुदायलाई माया गर्छौं। फोटोहरूको लागि धन्यवाद।
शार्क ट्यांकमा चित्रित
उद्यमीहरूले समस्याहरू समाधान गर्छन् र समाधानहरू प्रदान गर्छन्। हामी भित्र गयौं सार्क ट्यांक 2020 मा जंगलको आगोको धुवाँ र कुकुरहरूमा यसको स्वास्थ्य प्रभावको समस्याको समाधान प्रस्तुत गर्न। के हामीले सम्झौता पायौं?
सत्र 12 एपिसोड।
"मलाई लाग्छ कि यो एक शानदार विचार हो," मार्क क्युबान भन्छन्। K9 Mask® २०२० सिजन १२ एपिसोडमा शार्क ट्याङ्कमा थियो। ...थप पढ्नुहोस्.
किर्बी ह्युस्टन, टेक्सासबाट ओजाई, क्यालिफोर्निया सम्मको यात्रामा हुर्केका थिए गर्मीमा आफ्ना हजुरबा हजुरआमालाई भेट्न। दुर्भाग्यवश, उनको हजुरबुबाको छिमेकको पछाडिको पहाडहरूमा जंगली आगोहरू जल्नेछ। आगो बलेको पहाडलाई हेरेर उनी डराए र... थप पढ्नुहोस्.
समाचारमा K9 मास्क®